Ukuphupha Ivenkile yePawn Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Singatolikwa njani isimboli yamaphupha "ivenkile yevenkile"? Xa utolika iphupha, ayisiyophawu lephupha ngokwalo elibalulekileyo. Endaweni yokuba kufakwe iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka, ezinje ngemeko yephupha okanye iimvakalelo ngexesha lephupha.
Ke ngoko, jonga kwakhona iphupha lakho kwaye ukhumbule iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka. Kuba kungoko kuphela apho uya kukwazi ukufumana ukutolikwa "ngokuchanekileyo" kwephupha lakho le-pawnshop.
1 Uphawu lwephupha «ivenkile yevenkile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «indawo yokuthenga impahla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «indawo yokuthenga impahla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ivenkile yevenkile» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "ivenkile yevenkile" luqondwa ikakhulu njengesilumkiso ngokuchasene nenkunkuma. Kwangelo xesha ubayala abaphuphayo, kodwa kananjalo Ubumnandi. Kuba ukuba amaphupha kwi el mundo yomlindo iyaqhubeka ukujongana kakubi neendlela zabo zemali, kungekudala abayi kuba nanto yimbi. Uya kuqhubeka kuphela unokhuseleko lwezezimali ngokuqhubeka kobungqongqo.
Ke ngoko, ivenkile ethengisa izinto zokubamba ikwabuza nephupha ukuba lingaphili ngaphaya kwamandla alo. Kungenxa yokuba ukuthathelwa ingqalelo kwabo, kuphela kule ndlela yokwamkelwa eluntwini, bubuxoki.
Ngamanye amaxesha, ivenkile ye-pawn ikwaluphawu lwezilingo ephupheni, apho umphuphi angafanelekanga ukuba abandakanyeke kwihlabathi lokuvuka. Ukuba wenjenjalo, uya kujongana nobunzima obukhulu.
Ukuba iphupha lingena kwiofisi yemboleko kwiphupha lakho, kufuneka libe nawe ebomini bokuvuka. Ukungaphumeleli ukubala kwindawo yemali. Kwakhona, ishishini lakho aliyi kukhula njengoko kufanelekile.
Ukuba umphuphi uthembisa into ethile kwivenkile esetyenziselwa ukuphupha ephupheni lakhe, kuya kufuneka aqonde, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukuba ukwindlela engalunganga ebomini bokuvuka. Ke ngoko, kuya kufuneka ume kancinci kwaye ubuyele kumkhondo olungileyo. Ukuba iphupha uzibona ungumnini wevenkile ethengisa iphupha ephupheni, kungekudala uza kutsaleleka kwiingxaki zabanye abantu.
Uphawu lwephupha «indawo yokuthenga impahla» - ukutolikwa kwengqondo
Isimboli yamaphupha "ivenkile yokuthenga" ibonisa enye kwinqanaba lokuchazwa kwephupha. Ukwahlulahlula wento ethandwa kakhulu ngamaphupha. Uninzi lwexesha, olu toliko lubhekisa kwizinto kwaye kuncinci kubantu obathandayo okanye kubudlelwane.
Ivenkile ye-pawn njengophawu lwephupha inokuba luphawu lokungazithembi kokuphupha. Kungenxa yokuba esoyika kwihlabathi elivukayo ukuba akazukuvela ngaphandle ngendlela afuna ngayo. Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka athathele ingqalelo ngononophelo malunga nento azimisele ukuyikhupha kule nkangeleko yangaphandle. Kuba ukuba uyakuphika ngokusisigxina ubuqu bakho, oku kungakhokelela kukuphazamiseka kwengqondo.
Uphawu lwephupha «indawo yokuthenga impahla» - ukutolika kokomoya
Ingcaciso yephupha lokomoya ibona kwisimboli yephupha "i-pawnshop" isibonakaliso sephupha lokuba ukwilizwe elivukayo. amandla okomoya lilize.